TRANO FIZARANA SAKAFO HOAN’NY ZAZA SAHIRANA. | Radio Agape
TRANO FIZARANA SAKAFO HOAN’NY ZAZA SAHIRANA.
7 août 2013 FITIA AGAPE
Misaotra an’Andriamanitra lehibe isika ny amin’ny fahavitan’ny asa TRANO FIZARANA SAKAFO HO AN’NY ZAZA SAHIRANA SAHANIN’NY AGAPE.
Izay rehetra ataonareo amin’ireny madinika ireny no hataonareo amiko hoy ny Tompo.
Fisaorana lehibe no atolotra ny Tompo fa hita isan’andro ny fandrosoan’ny asa fanorenana, misaotra anao koa izay tsy manadino ireto zaza ireto, tsapanay fa tsy irery izahay eto ampanaovana izao asa izao tena hitanay fa misy mivavaka ho anay.hitanay ny tànan’ny Tompo manohana anay. ( Tohiny… sary vaovao ).
« Raha tsy Jehovah no manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy. » Salamo 127. 1
* Mandroso ny asa, ary miditra amin’ny famaranana isika izao, isaorana ny Tompo , ho Azy irery anié ny Dera.
*Ny Sarin’ireo ankizy ao amin’ny Centre AGAPE Ambatomaro. (fizarana ankanjo sy sakafo) .
Mahafaly anay mpiara-miasa eto amin’ny » Radio Agape » ny maneho fisaorana etoana ; an’ireo rehetra izay manampy sy mandray anjara amin’ny fikarakarana ireto zaza ireto. Solon-tenan’ireo maro hafa tsy azo sary satria lavitra (any Toliara,Fianara,Majunga,sns…)
– Misaotra ireo manome vola hividianana sakafo hamahanan’ azy ireto isaky ny alahady satria izay aloha no zaka hatreto.
– Misaotra ireo izay nanampy tamin’ny fampidirana ny ankizy hianatra koa tamin’ity taom-pianarana vaovao (2013-2014) ity.Ankizy 9 no tafiditra nianatra noho ianareo, izay malala-tànana ka nandoa ny(inscription), ary dia misaotra ny Tompo lehibe satria tamin’ny taon-dasa dia tsy nianatra izy ireo fa dia nirenireny teny fotsiny.
Misaotra antsika rehetra indray izay nanampy ny fampidirana ny mpianatra tamin’ny taona ( 2017-2018) ity fa ankizy 16 indray no tafiditra mianatra nohon’ny fanampiana izay nataontsika. Hita fa dia mandroso hatrany ny asa nohon’ny fisian-tsika rehetra izay manome tànana anay .Misaotra ny Tompo lehibe isika
Manaraka izany ankehitriny nohon’ny Fitiavanao azy ireo dia io efa ho vita ny trano, izay azo hampianarana azy ireo koa raha sitrapon’ny Tompo, koa dia sady ho voky ny kibo no ho voky koa ny fanahy. Ny ao ambony rihana no hisokatra ny birao « Radio Agapé » Madagasikara, izay hikarakarana ireo fandaharana rehetra ho alefa eto amin’ny radio malalan-tsika. Ento am-bavaka hatrany ny asan-tsika rehetra mba hitatra hatrany.
Matio 25 : 45 Fa hamaly azy Izy ka hanao hoe: Lazaiko aminareo marina tokoa: Araka izay tsy nataonareo tamin’ ny anankiray amin’ ireto kely indrindra ireto no tsy mba nataonareo tamiko.
Powered by WordPress | Theme Designed by: official r4i sdhc | Thanks to hgh injections, r4carddsuk.com and uk